How do I make my resume (CV) stand out?
မိမိရဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာ ထင်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
သင်ရေးတဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာဟာ သင့်ကို အလုပ်ခန့်မယ့်သူရဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးမှုကို အပြီးပိုင်ကျော်လွှားစေနိုင်မယ့် သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်လွှာကောင်းတစ်ခုဟာ တိကျမှု၊ အချက်အလက် စုံလင်မှုတို့နဲ့ အတူ ရေးသားရာမှာလည်း ပညာသားပါဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ "ဝိုင်း" ကတော့ သင့်အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်စေမယ့်နည်းလမ်း(၃) ခုကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) မိမိလျှောက်ထားတဲ့အလုပ်၊ ရာထူးနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် စကားလုံးများကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ယခင်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကောင်းမွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကို အသာပေး ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုရပါမယ်။ သတိပြုရမှာကတော့ ထိုစကားလုံးတွေဟာ သင်အခု လျှောက်ထားမယ့် ရာထူးကိုလည်း အထောက်ပံ့ ပြုရာ ရောက်ရပါမယ်။
ဥပမာ - စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကဏ္ဍ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် " လုပ်ငန်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု " ဆိုတဲ့ အချက်ကို အသာပေး ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ " အရောင်းမြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာ အောင်မြင်တယ်" ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရေးသားမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သမားလို့ ဖော်ညွှန်းလိုက်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ Digital Marketing နဲ့ ပတ်သတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Search Engine တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
သင်လုပ်ခဲ့ပြီးသမျှ အလုပ်တိုင်းကို ပြောပြနေတာထက်စာရင် အခု လျှောက်မယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လို ထူးချွန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာကို ထိထိမိမိ ပြောပြသင့်ပါတယ်။ သင့်ယခင်လုပ်ငန်းမှာ အမြတ်စွန်းတွေ တက်လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာကို ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကြေးပမာဏ (သို့မဟုတ်) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖော်ပြတာဟာလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) သေသပ် တိကျပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဆန်သော လျှောက်လွှာပုံစံကို အသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာက ကြည့်ရသူ အမြင်ရှင်းအောင် အရင် ပုံစံချပါ။ နာမည်၊ လိပ်စာ၊ ပညာအရည်အချင်းများ ကို နံပါတ်တပ်ပြီး ဖော်ပြနေတာထက် စာရင် ပိုအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာကို ချရေးပါ။ ( ဥပမာ -အရင်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ) သို့သော် အရင်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အငြင်းသဘောဆောင်သည့်အချက်များအား ထည့်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ရေးသားသောစကားလုံးပုံစံနှင့် အရောင်ကို အရမ်း ရှုပ်ထွေးအောင် အလှမဆင်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မှင် အနက် တစ်ရောင်တည်းကို သာ အသုံးပြုပါ။
အလုပ်လျှောက်လွှာ နမူနာများကို အောက်ပါ လင့်တွေ ကနေလည်း တစ်ဆင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Your resume is the key to clinching the interview with your potential employer. A good resume is specific, informative and professional. Wynee has come up with these3simple steps.
(1) TAILOR FOR THE INDUSTRY AND ROLE
Use action words to highlight how you have performed in your previous job(s) which can help you stand out for the role you are applying for. For business development roles, consider mentioning “maintained the relationship”. By saying that you have “hit the sales targets”, you display your skill asasales person. In your digital marketing roles, you may have “optimized the search engine”.
(2) THE PAST RESULTS
Instead of listing all your past work experiences, highlight how you impacted the company(s) you worked for. A good way to demonstrate how you added value to the bottom line is showing quantifiable achievements, example as in monetary ($) signs or margins (%).
(3) USE A MODERN, PROFESSIONAL FORMAT
Format your resume so that it is pleasing to the eye. Do focus more on content, rather than visual. List the content in the order of importance. Avoid including negative information about previous job(s) or employer(s). Also avoid overusing fancy fonts and colors.
Some downloadable sample resume template sites: www.resumegenius.com and www.livecareer.com
What is networking? (PART I)
Tips fromaRecruiter for Your Next Interview (Part2of 2)
Perfect your Two-Minute Pitch to Potential Employers